ဇွန်လတွင် Netflix သို့ SHIELD, Scandal, Grey's Anatomy ၏ကိုယ်စားလှယ်များလာရောက်သင့်သည် - တီဗီ
SHIELD, အရှုပ်တော်ပုံ၊ Grey ၏ခန္ဓာဗေဒ၏အံ့’s ခြင်း၏အေးဂျင့်သစ်ရာသီများသည်ဇွန်လတွင် Netflix တွင်ဖြစ်သင့်သည်
Hulu ရဲ့ Cable တီဗီဝန်ဆောင်မှုတစ်လလျှင် $ 30 ကုန်ကျပါလိမ့်မယ် Luke Cage ရာသီ ၁ ကြံစည်မှုလိုင်းများနှင့်လူကြမ်းများဖော်ပြခဲ့သည်
SHIELD ရာသီ 3, အရှုပ်တော်ပုံရာသီ5နှင့် Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 12 ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဇွန်လအတွက် Netflix အပေါ်ဖြစ်သင့်သည်!
သင်ကပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်သတင်းကောင်းရှိသည် SHIELD, အရှုပ်တော်ပုံ၏အံ့’s ခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များ, နှင့် Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ!
Netflix ကလွှတ်သင့်တယ် SHIELD ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ ၃၊ အရှုပ်တော်ပုံ ရာသီ 5, နှင့် Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ ဇွန်လ 2016 ခုနှစ်ရာသီ 12 ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်လျှို့ဝှက်အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်စီးရီးသစ်ရာသီသစ်များစတင်မည့်အချိန်ကို Netflix ကတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix နှင့်ကွန်ရက်များအကြားပုံစံများနှင့်သဘောတူညီချက်များကိုသာလေ့လာပါသည်။ အတိတ်အပြုအမူနှင့် Netflix နှင့် ABC တို့အကြားသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုပြပွဲရဲ့ရာသီအသစ်ဇွန်လအတွက် Netflix ကအပေါ်စီးဆင်းရရှိနိုင်ဖြစ်သင့်သည်!
သင်မြင်, Netflix နှင့် ABC ရုပ်သံအပေါ် ABC အပေါ်ရာသီဇာတျသိမျးပြီးနောက်အတိအကျရက်ပေါင်း 30 Netflix ကမှ ABC ရုပ်သံရဲ့ရှိုးပွဲအချို့ကိုဆောင်ခဲ့သောသဘောတူညီချက်ရှိသည်။ လူသတ်မှု၊ အရှုပ်တော်ပုံ၊ Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဘယ်လိုဝေးဝေးနေရမလဲ၊ နှင့် SHIELD ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ် သဘောတူညီချက်တွင်ပါဝင်သည်။
သင့်အားသက်သေပြရန်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလတ်တလောရာသီများ SHIELD, အရှုပ်တော်ပုံ၏အံ့’s ခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များ, နှင့် Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ ABC ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်ရက် ၃၀ အကြာတွင် Netflix သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, SHIELD ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ် ရာသီ2သည် ABC တွင် ၂၀၁၅ မေလ ၁၂ ရက်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ရာသီကို Netflix တွင်ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၅ တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Netflix နှင့် ABC တို့အကြားသဘောတူညီမှုသည်ယခုနှစ်အတွင်းဆက်လက်ရှိနေသည်ဟုယူဆလျှင်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြပွဲများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန့်မှန်း Netflix လွှတ်ပေးသည့်ရက်စွဲများကိုဒီမှာတွေ့နိုင်သည်။
SHIELD ရာသီ3အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ: ဇွန်လ 16, 2016
အရှုပ်တော်ပုံရာသီ 5: ဇွန်လ 11, 2016
Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 12: ဇွန်လ 18, 2016
လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ဝေးရနိုင်ပုံ ရာသီ2ကို Netflix တွင်Aprilပြီလတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်၍ ဤ Netflix လွှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်များနှင့်တစ်စုံတစ်ရာပြောင်းလဲပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားအသိပေးရန်သေချာပါလိမ့်မည်။ Netflix ကစာရင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်နှင့်ဇွန်လတွင် Netflix သို့လာမည့်ပြပွဲအသစ်များနှင့်ရုပ်ရှင်အသစ်များကိုလည်းထုတ်ဝေမည်။
SHIELD, အရှုပ်တော်ပုံ၏အံ့’s ခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များ, နှင့် Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ နှင့် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးတီဗွီဇာတ်လမ်း ၅၀ တို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
Steve Carell ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီအစီအစဉ်များ